स्टीव वोज्नियाक नयाँ फिल्म 'स्टीव जॉब्स' को बारेमा कुरा गर्छन् म म्याकबाट हुँ
स्टीव वोज्नियाक फेसबुकमा नयाँ फिल्म 'स्टीव जॉब्स' को बारेमा कुरा गर्छन्
एप्पल को सह-संस्थापक स्टीव Wozniak आफ्नो फेसबुक मा बोलेको छ, आफ्नो दिन राम्रो र नराम्रो बारेमा राय, नयाँ 'स्टीव जॉब्स' फिल्मको बारेमा। स्टीव Wozniak मा पनि टिप्पणी स्याउको शुरुआती दिनहरू र को नेतृत्व जॉन स्कुलले, जसले बचत गर्न मद्दत गर्‍यो मूल म्याकोन्टोश र यसको परिणाम स्वरूप एप्पल.
वोजले भने कि नयाँको शुद्धताबाट उनी प्रभावित भए चलचित्रजो छ लेखिएको द्वारा आरोन Sorkin y ड्यानी बोयल द्वारा निर्देशित, तर यो यसको त्रुटिहरु बिना छैन। केहि दृश्यहरू वास्तविक जीवनमा कहिल्यै भएका थिएनन्, जबकि भएका अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हराइरहेका छन्।
मैले चलचित्रमा कामका साथ गरेको कुराकानी कहिले पनि भएको थिएन, तर ती विषयवस्तुहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् जुन वास्तविक थियो र हुनसक्छ अर्कै रूपमा बाहिर आयो, निश्चित रूपमा कामबाट। वोज बताउँछन्।
चलचित्रमा केहि अन्य कुराकानीहरू, जसमा वोजले मूल म्याकिन्टोश रिलिजको आलोचना समावेश गर्दछ र नेक्सटी कम्तिमा पनि भएको थिएन, कम्तिमा पनि जॉब्स र मसँग होइन।
वोजलाई वास्तवमै मनपर्दछ के नौकराहरूको एक राम्रो व्याख्या र उसको व्यक्तित्व वास्तवमै एक धेरै विश्वसनीय तरीकाले प्रतिनिधित्व गर्दछ। वोज भन्छन् कि व्याख्या द्वारा गरिएको Fassbender, वास्तविक जीवनमा धेरै मा धेरै समान छ, यो जोडेर अभिनय र निर्देशन उत्कृष्ट छ.
यद्यपि वास्तविक कहानी छलफलयोग्य छ (र यसले केही पक्षहरूमा नकारात्मक भाग थप्न सक्छ), यो राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ।
वोज थप्दछन् कि नोकरी कहिल्यै एप्पल बाहिर निकालियो, ऊ गयो, र कि उहाँ सँधै कम्प्युटर (विफलता) सिर्जना गर्न उसको विश्वासमा उसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म, जॉब्सले आफूलाई ती असफलताहरूको लागि आफैलाई दोषी ठहराउँदैन। उदाहरण को लागी, LISA भाडा धेरै खर्च, र कार्यहरूले एप्पल इञ्जिनियरहरूलाई म्याक सस्तो नभएकोमा दोष दिए यद्यपि स्टीवलाई कम्प्युटरहरू थाँहा थिएन र के यसले उचित म्याक बनाउन के लिन्छ।
स्टीवले महसुस गरे कि यो कम इन्जिनियरहरूको गल्ती थियो जसले विकल्पहरू फेला पार्न सकेनन्। उनीहरूको बैठकमा कामहरू, बेकार ईन्जिनियरहरू र बोलाइयो।
रोजगार 'मार्केटिंग कौशल, को बिक्री को लागी धन्यवाद Apple II आर्थिक सहयोग एप्पल III, LISA, Macintosh र NeXT विफलताहरुस्टीव वोज्नियाक भन्छन्, र यो यसमा हाइलाइट गरिएको छैन चलचित्र.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » स्टीव वोज्नियाक फेसबुकमा नयाँ फिल्म 'स्टीव जॉब्स' को बारेमा कुरा गर्छन्
एप स्टोरको साथ नयाँ एप्पल टिभीले २०१ 24 मा २ M मिलियन युनिटहरू बेच्न सक्दछ
नयाँ रिपोर्ट आईप्याड प्रो विवरण मा वर्णन गर्दछ